संसद भवन कतिसम्म भाडामा ? दैनिक ४ लाख १० हजार ? - inaruwaonline.com
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र ०२, २०७४ समय: ७:५३:१८
काठमाडौँ, २ चैत । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठक सञ्चालन हुने बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको भाडाबापत सरकारले दैनिक ४ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
बिरुवालाई विभिन्न आकार दिएर आकर्षक बनाइएको छ। ३० भन्दा बढी जातका फूल रोपेका छन्। ‘बाहिरको नर्सरीबाट ल्याउनेभन्दा पनि स्थानीय जातको फूल रोपेका छौं,’ उनले भने। कान्तिपुर दैनिकबाट